Tsidiho ny Hultsfred | Ao Hultsfred dia misy toerana ho an'ny fiainana!
🎟️ Kalandrie hetsika
📕 Misoratra anarana hetsika
🍽️ Mihinàna sy misotroa
Ao amin'ny sakafo haingana sy pizzeria
🚜 Fivarotana fiompiana
🛏️ trano fandraisam-bahiny
🪑 Varotra antitra sy parasy
🏊‍♂️ Toerana fandroana
🚴‍♀️ Fiara bisikileta
Åda mijery vorona
🪁 Zavaboary & fiainana an-kalamanjana
⛸️ Hetsika ririnina
⛷️ Ski miampita firenena
🛷 Toboggan mihazakazaka
🏡 Trano fonenana
🖼️ Zavakanto & Asa tanana
🏡 Tontolo ara-kolontsaina-tantara
🏘️ Mozea & Fampirantiana
🏞️ Parks & fiambenana
Tsidiho i Hultsfred
Misy toerana eto mandritra ny fiainana
Tsidiho i Hultsfred2022-05-09T10:37:52+02:00
Makà torohevitra momba ny traikefa nahafinaritra
Kungsfiskaren nandritra ny Fetiben'ny Hultsfred
Tadiavo Hultsfred sy Vimmerby 22 Mey
Aingam-panahy bebe kokoa
Aza adino izay mitranga ao amin'ny kaominin'i Hultsfred.
Fikarohana sy fijerena hetsika
Ampidiro teny lakile. Mikaroha hetsika Keyword.
Misafidiana toerana. Mitadiava hetsika isaky ny toerana.
Hizaha fizarana hetsika
2022-05-20	20 May, 2022
20 mey amin'ny 09 hariva - 17: 00	 miverimberina
Zoma tsena ao Hultsfred
Ivon-toerana Hult	Bryggerigatan, Hultsfred
Ao amin'ny drafitr'i Tor eo afovoan'i Hultsfred, ny varotra tsena dia voalamina isaky ny zoma mandritra ny taona. Eto ianao dia afaka mividy fromazy, charcuterie, vatomamy, baoty ary maro hafa. Miovaova ny elanelam-potoana
Andro teo aloha
Misoratra anarana amin'ny kalandrie
Export .ics rakitra
Tranombakoka mahafinaritra, hetsika ataon'ny mpianakavy, fahitana mahaliana ary toetra mahafinaritra. Jereo ny Hultfred iray manontolo!
Björneström sy Näcken
Ny vondrom-piarahamonina Björneström dia nanjary fisaorana noho ny fikosoham-bary. Tamin'izany no nisehoan'ny indostrian'ny fanaka Virserumsbygden nandritra ny faramparan'ny taonjato faha-1800. Ny fiarahamonina dia maneho ny fiandohan'ny taonjato.
Ilay farihy lalina
Djupsjön dia farihy kely sy lalina any andrefan'ny Hultsfred. Ilay farihy dia ao anatin'ny FVO an'i Stora Hammarsjön. SFK Kroken mijery ny faritra rehetra
Toerana fandroana an'i Lillesjön
Ankafizin'ny fianakaviana manan-janaka. Ny faritry ny fandroana dia misy boaty, faritra misy barbecue, trano ivelan'ny trano, fahazoana miditra sy manintona ny kianjan'ny Swing Volleyball Jetty WC Barbecue area
Sauna sy tubo mafana an'i Hammarsjön
Ao amin'ny faritr'i Stora Hammarsjö ny sauna sy dobo mafana ao Hammarsjön. Raha te hiaina zavatra manokana ianao dia tokony hanandrana ny sauna sy dobo mafana ao Hammarsjön. Eto dia fandoroana kitay ary
Ala majika tena misy kesika taloha izay mijoro manodidina ny vatolampy izay rakotra lichens. Ny tahirin-javaboary Björnnäset dia miorina eo amin'ny tampon-kavo iray any Åkebosjön. Eo ny tahiry
Ny manodidina an'i Coppersmith
🏡 Tontolo ara-kolontsaina-tantara, 🖼️ Zavakanto & Asa tanana
Galleri Kopparslagaren, Rallarstugan ary Glaspellehuset dia sasany amin'ireo tontolo ara-kolontsaina sy ara-tantara manan-danja eo amin'ny manodidina. Miaraka amin'i Storgatan ao afovoan'i Hultsfred dia misy tranobe manana lehibe
Toerana fandroana an'i Hesjön
Tongasoa eto amin'ny toerana fandroana an'i Hesjön! Misy fidiovana ivelany, trano fidiovana sembana, efi-trano. Faritra Barbeky, faritra lomano misy jetties ary tilikambon'ny fitsambikinana ary kianja filalaovana volley. Avy amin'ny fiantsonan'ny fiara dia misy làlana azo namboarina
Oppbjärken dia farihy ala mikitroka misy rano mahantra sy mahantra ary madio. Ny farihy dia misy kilometatra vitsivitsy atsinanan'ny Hultsfred, atsimon'ny vohitr'i Fallhult. Around
Fitrandrahana natiora Hulingsryds
Hulingsryd dia eo avaratry ny Farihy Hulingen ary manolotra tontolo ony fialofana, ala amoron-dranomasina maitso, ala kesika maina, kijana malalaka ary honahona mando. Misy ampahany lehibe ankehitriny
Jery ​​& hetsika
Gaga amin'ny tontolo ara-tantara, zavakanto sy asa tanana, biby dia, natiora mahafinaritra ary maro hafa. Betsaka ny hetsika sy fisarihana eto, ary maro amin'izy ireo no misokatra mandavantaona!
🏨 Hotely, .Fisakafoanana
Målilla Hotell dia hotely kely misy trano fisakafoanana. Sakafo atoandro anio, a la carte, pizza ary salady no aroso eto. Manana ny zony feno ilay trano fisakafoanana. Misy 40
Soedoa Rock Archive
🖼️ Tranombakoka & fampirantiana, 🎺 Mozika
Zavatra antsasa-tapitrisa mahery mifandraika amin'ny mozika malaza soedoà. Eto ianao dia hahita firaketana, afisy, fandraketana video, boky, fahalianana - ary ny fitafian'i Kurt Olsson tany am-boalohany! Archive Rock Swedish
Ny lalan'ny serfa
Amin'ny Hjortenleden dia mandeha amin'ny lalana vatokely tsara ianao amin'ny alàlan'ny faritra fambolena sy vohitra, mifangaro amin'ny lalana kely kokoa mamakivaky ny ala. ianareo
Fahitana sy hetsika rehetra
Jereo ny toerana fandroana rehetra
Jereo ny làlana fitsangantsanganana rehetra
Jereo ny toby fitobiana rehetra & toby natiora
Jereo ny tokantrano rehetra
Sakafo hariva tsara kokoa hankalazana, sakafo atoandro ao an-tanàna na hariva mahafinaritra miaraka amin'ny namana. Misy zavatra ho an'ny tsiro sy fotoana rehetra.
Any amin'ny Virserums Konsthall no misy ny kafe. Eto ianao dia afaka mitsidika ny galeriana kanto ary mankafy ny kanto ary avy eo mankafy kafe tsara. Eto
Kungen Restaurang dia eo afovoany ao Hultsfred eo anelanelan'ny drafitr'i Tor sy Köpingsparken. Ny King Restaurant dia manolotra pizza, burger, trondro ary chips ary salady. Tsy manam-paharoa io lehilahy io
Pizzeria no misy afovoany ao Målilla. Ankoatra ny pizza, ny kebab sy ny salady dia eo amin'ny menio ihany koa. Sady hanafatra no hitondra na hipetraka
Raha mila zavatra haingana ianao, Sibylla dia rojom-pisakafoanana haingam-pandeha fanta-daza. Sibylla dia manolotra ny zava-drehetra avy amin'ny kilasika soedoà "a masaka miaraka amin'ny mofo" (izany hoe saosisy masaka
Hotell Dacke no hotely fandraisam-bahiny misy ny fianakaviana ao Virserum. Eo akaikin'ny hotely no misy fijanonana fiara lehibe. Akaiky ny ala sy ny farihy. Trano fisakafoanana ao amin'ny hotely
Homeslice Pizzeria dia eo afovoany ao Virserum eo akaikin'ny tetezana
Tsy maninona raha ny masonao dia napetraka amin'ny faran'ny herinandro tantaram-pitiavana, fialantsasatry ny mpianakavy na fihaonambe - misy karazan-trano hipetrahana mifanaraka amin'ny fotoana rehetra.
🏕️ Lasy, AféCafes, hanao kayak
Eto ianao dia miaina amin'ny fahitana mahafinaritra ny Lake Hulingen! Akaiky ny morontsiraka, ny fotodrafitrasa ary ny cafe ianao. Dia an-tongotra lavitra roa kilaometatra manaraka ny fidirana
Lönneberga fitobiana voajanahary
Toeram-piantsonana ho an'ny karajia, motera ary ny mety ho filasiana Ity ny fidirana amin'ny trano fidiovana sembana misy rano mafana sy efitrano fanovana. Faritra Barbecue ary manodidina ny 900 metatra mahery
Toeram-pijanonana Målilla Hembygdspark
Toeram-piantsonana Målilla Hembygdspark. Ao amin'ny fiantsonan'ny fiara lehibe ao Målilla hembygdspark dia misy toerana fijanonana ho an'ny karajia sy motera.
Fiskebodarna - Stora Hammarsjöområdet dia manodidina ny 10 km andrefan'ny Hultsfred, manodidina ny 25 minitra mankany Vimmerby. Ny faritra dia voajanahary sy faritra iarovana ny jono izay manodidina ny 30
Eo ivelan'ny afovoan'i Målilla no misy Villa Karllösa. Ny tranom-bahiny dia eo afovoan'ny natiora ao amin'ny faritra ala mahafinaritra. Manolotra efitrano milamina sy maoderina, vao nohavaozina
Cookies sy ny teknolojia fitahirizana mitovy	MANAIKY
Izahay ao amin'ny visithultsfred.se dia manaja ny fiainanao manokana ary manome lanja ny fifandraisanay aminao. Fantatray ihany koa fa mety manana eritreritra momba ny fiainanao manokana ianao sy ny fomba ampiasanay ny cookies. Tahaka ny maro hafa, ny tranonkalantsika dia mampiasa teknolojia hanangonana vaovao izay manampy anay hanatsara ny traikefanao ary koa ny vokatra sy serivisinay.
Discoverers 2022 Amy Winehouse Kungsfiskaren nandritra ny Fetiben'ny Hultsfred Tadiavo Hultsfred sy Vimmerby 22 Mey
Discoverers 2022 Amy Winehouse Kungsfiskaren nandritra ny Fetiben'ny Hultsfred Tadiavo Hultsfred sy Vimmerby 22 Mey Ny ganagana - ny maherifontsika volamena!